Ianaro ny fomba fampidinana sy fametrahana fampiharana amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Efatra andro sisa no sisa tavela mandra-pahatongan'ny Apple Watch midina any Espana ary izany no antony itokananay lahatsoratra iray ao amin'ny bilaoginay izay mampiseho aminao ny dingana tokony harahinao mba hampidinana ireo rindranasa ary apetrakao amin'ny famantaranandronao. Raha ny momba ny iPhone na iPad dia manana isika fampiharana izay antsoina hoe App Store ahafahantsika mikaroka ireo rindranasa sy mametraka azy ireo raha misy olana bebe kokoa.
Na izany aza, tsy mandeha amin'ny fomba mitovy ny Apple Watch ary mila ny iPhone afaka misintona ireo rindranasa sy mametraka azy ireo ianao. Mila misintona ireo rindranasa Apple Watch amin'ny alàlan'ny fampiharana izay ananantsika izahay ny iPhone ary avy tamin'ny fanombohana ny iOS 8.3, ny app Apple Watch. Ity rindranasa ity no tokony hidirantsika manomboka izao raha te hanomboka hampiasa ny famantaranandrontsika isika, satria izy no miandraikitra ny fampifandraisana azy amin'ny iPhone.
Fotoana tokony hahafantaranao tsara hoe manao ahoana ny fizotry ny fisintomana ireo rindranasa sy ny fametrahana azy ireo amin'ny Apple Watch anao. Ity zoma ity dia ho iray amin'ireo andro izay hisian'ny mpampiasa an'arivony hanana ny famantaranandrony marani-tsaina ary hanomboka hampiasa azy io. Mba hanaovana izany dia tokony hazava amin'izy ireo ny dingana tokony harahin'izy ireo mba hahavonona haingana ny famantaranandron'izy ireo. Andao atomboka ity fampianarana ity amin'ny fanazavana ny zavatra tsy maintsy ataonao mba hisintomana ireo rindranasa ao amin'ny App Store.
1 Ahoana ny fomba fampidinana apps amin'ny Apple Watch
2 Ahoana ny fametrahana apps amin'ny Apple Watch
Ahoana ny fomba fampidinana apps amin'ny Apple Watch
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manokatra ny fampiharana Apple Watch amin'ny iPhone-nao.
Tsy maintsy tsindrio ilay sokajy izao "App Store".
Tadiavo ny rindranasa tadiavinao mihoatra ny 6000 izay efa misy. Ataovy ao an-tsaina fa afaka mitady rindranasa ianao amin'ny fikitihana ny "Search" na "Browse" na "Featured" raha te hahita apps vaovao izahay.
Raha misintona ny rindranasa dia tsindrio "Mahazo" na "Mividy" raha voaloa.
Raha vantany vao alaina ao amin'ny iPhone ny rindranasa dia tsy maintsy apetrakao amin'ny Apple Watch izy ireo. Amin'izao fotoana izao, ny rindranasa smartwatch an'ny Apple dia miankina amin'ny namany amin'ny iPhone, izany hoe, raha misintona ny fampiharana Telegram ho an'ny Apple Watch ianao, ny app Telegram ho an'ny iPhone dia ho sintonina avy hatrany satria eo no anaovana ny asa rehetra sy ny app Apple Watch mikarakara fotsiny ny fampisehoana ny valiny. Manomboka amin'ny fararano rehefa mivoaka ny watchOS 2 dia efa misy ny fampiharana an-toerana ary hiova ny zavatra.
Ahoana ny fametrahana apps amin'ny Apple Watch
Sokafy ny app Apple Watch amin'ny iPhone-nao.
Tsindrio ny sokajy "Ny famantaranandroko".
Ao amin'ny lisitry ny rindranasa izay tsy maintsy hitadiavantsika ilay tiana hapetraka amin'ny Apple Watch, tsindrio eo dia omeo mba hametrahana.
Avy eo ampandehanana ny safidy "Asehoy ny app amin'ny Apple Watch".
Hisintona ho azy miaraka amin'ny famantaranandrontsika ny fampiharana ary hiseho eo amin'ny Apple Watch ireo fampiharana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ianaro ny fomba fampidinana sy fametrahana rindrambaiko amin'ny Apple Watch
CARLOS TEVAL dia hoy izy:
NAHOANA NO MISY APPS NANORATRA AO AMIN'NY IOS, MBOLA MISEHO EO AMIN'NY FIVORIANA APPS ARY Azoko atao ny misintona azy ireo amin'ny IPHONE, AZONAO AOKA MBOLA HANDROSO AZY AMIN'NY FANORENANA 4?
Valio amin'i CARLOS TEVAL